Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » News Sustainability » Ukuphendula ngoku kwiKhowudi yemozulu engxamisekileyo ebomvu
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Education • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeMalta Breaking • iindaba • Xanduva • News Sustainability • Tourism • Iindaba zeWired Travel
I-SUNx Malta namhlanje ikhuphe ingxelo yayo yesibini yonyaka malunga noKhenketho lobuhlobo bemozulu ngaphambi kweNgqungquthela yemozulu yeGlasgow COP 26. I-SUNx yi-NGO esekwe e-EU esekwe njengelifa kwimozulu kunye nozinzo trailblazer, Maurice Strong.
Ingxelo ibonisa ukwanda kweentlekele zehlabathi eziqhutywa yimozulu kunye nendlela oku okunempembelelo ngayo kwicandelo loKhenketho noKhenketho elibalulekileyo kuqoqosho lwehlabathi.
Ifuna ukomelela kwemozulu ngoku kwimisebenzi yoKhenketho noKhenketho.
Le Ngxelo ikwafuna ukuphuculwa kokungcola kunye nezicwangciso zokuzinza ngokusekwe kwisayensi, imozulu, kunye neemfuno zolutsha.
Ilangax ingxelo ifuna umnxeba we-DASH-2-Zero exhasa iSibhengezo soKhenketho saseGlasgow.
Ngokusekwe kwidatha yophando ekhethiweyo, iNgxelo ibonisa ukwanda kweentlekele zehlabathi eziqhutywa yimozulu kunye nendlela oku okunempembelelo ngayo kwicandelo loKhenketho noKhenketho elibalulekileyo kuqoqosho lwehlabathi.
Ixhasa iSibhengezo soKhenketho saseGlasgow kwaye ikhuthaza i-DASH-2-Zero ukuba ithathe izibophelelo ezenziweyo kwaye zikhawuleze ziphakamise iithagethi zokukhutshwa kwe-zero carbon dioxide ye-2030 kunye ne-zero greenhouse emissions ngu-2050.
Iifowuni zokomelela kwemozulu ngoku kwimisebenzi yoKhenketho noKhenketho, kunye nokuncitshiswa okucacileyo kokungcola kunye nezicwangciso zokuzinza ngokusekwe kwisayensi, imozulu, kunye neemfuno zolutsha.
Chonga uluhlu lweenkonzo zenkxaso ezikhoyo ukunceda iinkampani kunye noluntu ukuba luhlale kumkhondo wekamva elinobuhlobo lokuhamba kwemozulu.
Inikezela ngefayile yayo Imozulu eyiRegistry yokuHamba ngobuhlobo idityaniswe ne-UNGlobal Climate Action Portal ukunceda abathathi-nxaxheba kwezokhenketho babhalise imozulu kunye nokuzinza kwaye babonise inkqubela.
Uqonda umdla ophambili kunye nendima yolutsha ekujonganeni nengxaki yemozulu ekhoyo kunye indlela abantu abancinci abanceda ngayo ukukhuthaza utshintsho oluqinisekileyo kwicandelo loKhenketho noKhenketho.
UNjingalwazi Geoffrey Lipman, uMongameli welangax Malta, kunye noMongameli Amaqabane eMozulu yaMazwe ngaMazwe noKhenketho (ICTP), uthe, "Asonwabanga nje kukuxhasa iSibhengezo saseGlasgow, kodwa siyathemba ukuba iNgxelo yethu yokuHamba kweMo yezulu iza kukhuthaza inyani kunye nempendulo entle kwikhwelo likaNobhala Jikelele we-UN uGuterres lokuba kubhalwe iCode Red for Humanity, egxininiswe yi-IPCC 6th yakutshanje. INgxelo yoVavanyo. Ingqondo yethu yokuHamba ngobuhlobo bemozulu kunye nokufowuna kwethu ISIKHWAMA-2-Zero Inokuthi isebenze njengesixhobo sokutshintsha ngokukhawuleza kunye nomjelo oya kwi-UN ekhokelwe ngo-2030/2050 ngoGayo oluCocekileyo kunye noCoceko lweNdlela ngekamva elingcono.
“ILANGAx Malta ikwazile ukubeka eyayo Umbono weminyaka elishumi, ejolise kwiinkampani ezibhalisiweyo ezili-10,000 1000 kunye noluntu oluyi-2030 ngowama-100,000, kunye namaQhinga eMozulu ayi-XNUMX ukuxhasa utshintsho ”
Ukukhuphela ingxelo, Cofa apha.
SUNx ngumbutho osekwe kwi-EU, ongenzi nzuzo, osekwe njengelifa kuMaurice Strong, kwimozulu kunye noovulindlela bokuzinza kwisiqingatha senkulungwane esidlulileyo. Isebenzisana noMphathiswa wezoKhenketho waseMalta kunye noKhuseleko loMthengi kunye noGunyaziwe wezoKhenketho.
SUNx IMalta idale 'ucoceko nococekileyo, inkqubo yemozulu enobuhlobo' ukunceda iinkampani zoKhenketho noKhenketho kunye noluntu ekuguqukeni kuqoqosho lwemozulu entsha. Le nkqubo isekwe ekunciphiseni ikhabhoni, ukuhlangabezana neenjongo zoPhuhliso oluZinzileyo, kunye nokuthelekisa indlela eParis 1.5C. Yintshukumo kunye nemfundo egxile-ekuxhaseni iinkampani zanamhlanje kunye noluntu ekuhambiseni iinjongo zabo zemozulu kunye nokukhuthaza iinkokheli ezisencinci ngomso ukuba zilungiselele ukuvuzwa ngamakhondo kwicandelo loKhenketho.